VAOVAO AVY AMIN’NY POLISIM-PIRENENA » Police Nationale
« AMBOHITSOA : ARRESTATION D’UN HOMME POUR VIOL SUIVI DE MEUTRE D’UNE FILLETTE DE QUATRE ANS
Tovolahy roa mpanendaka sady mpanao sinto mahery »
VAOVAO AVY AMIN’NY POLISIM-PIRENENA
I/ Manoloana ny filazana nataon’olona tamin’ny radio tsy miankina iray mahakasika ireo jiolahy voasambotra noho ny famakian-trano nataon’izy ireo teny 67ha ka natolotra ny fitsarana tamin’ny 07 septembre 2013, izay voalaza fa efa miriaria eny sahady,dia milaza ny tompon’andraikitra anivon’ny polisim-pirenena ao amin’ny Boriboritany faha-7 eny 67Ha fa mbola eny tsiafahy daholo ireo telolahy voasambotra fa tsy misy tafavoaka araka ny voalazan’ny mpitantara akory. Manainga ny rehetra araka izany ny Polisim-pirenena mba ho tony ary tsy ho kivy ny amin’ny fiaraha-miasa atao amin’ny mpitandro ny filaminana ny amin’ny fanenjehana ireny olon-dratsy ireny.
II/ Lehilahy iray no hitan’ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny boriboritany faha-7 eny 67Ha nangalatra valizy iray tao anaty fiara 4×4 nijanona teny amin’ny fiantsonan’ny fiara fitanteram-bahoaka laharana 119 eny 67 Ha, nandritra ny fisafoana natao tamin’ny Alarobia, 18 septembre 2013, tamin’ny 4 ora hariva. Avy hatrany dia nosamborina ity lehilahy ity saingy mbola nitsoaka, tsy lasa lavitra nefa dia tratran’ireo Polisy nanenjika. Ilay fiara noentin’ny tompon’entana kosa efa lasa ka manainga ny tompon’ilay valizy mainty lehibe izay misy entana ao anatiny ny tompon’andraikitry ny Polisim-pirenena fa miandry azy ao amin’ny kaomisarian’ny Polisim-pirenena boriboritany faha-7 ao 67 Ha io valizy io.
37 taona ity mpangalatra ity ary mipetraka eny anatihazo Isotry, mitondra ny anarambositra hoe”TOR”. Hatolotra ny fitsarana anio ny lehilahy.
III/ Ramatoa iray avy any TOAMASINA izay niantsena teny amin’ny 67 Ha omaly 19 Septembre 2013 tamin’ny 11 ora maraina no lasibatry ny tovolahy mpanao sinto-mahery ny kavina volamena teny an-tsofiny roa. Nahita izany ny olona teo amin’ny manodidina ka raikitra ny horakoraka sy fifanenjehana ka Polisy niasa teny an-toerana no nahasambotra azy. Naverina tamin’ny tompony ilay kavina volamena ary ilay mpanendaka kosa nentina teny amin’ny kaomisaria boriboritany faha-7 anaovana famotorana.
Androany no atolotra ny fitsarana ity farany.
IV/ Nahazo antso avy amin’ny olona tsara sitrapo ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria boriboritany faha-7 eny 67 Ha ny alin’ny 19 Septembre 2013 fa misy roalahy manosika môtô izay mampiahiahy azy ireo amin’ny làlana boulevard le l’europe tsy dia lavitra ny MAXIME 67 Ha. Avy hatrany dia nidina teny an-toerana ny Polisy. Rehefa nahatazana ny fiaran’ny Polisy anefa ireto mpangalatra dia nilefa ary navelany teo ilay môtô. Natao ny fitadiavana ny tompony ary atolotra azy androany ilay môtô-ny.
V/ Tamin’ny 10 septenbre 2013 tamin’ny 5 ora latsaka fahaefany, dia nisy lehilahy mpamily fiara mpitatitra entana 3CV tonga tao amin’ny Commissariat de Police etsy 67 Ha, nilaza fa nisy vehivavy naka azy mba hitatitra ny entany salon complet sy kidoro eny MANDROSOA IVATO, ka rehefa tonga teo amin’ny COUM 67Ha dia nivoaka ilay vehivavy ka tsy hita intsony izay nanjavonany. Efa ao amin’ny biraon’ny polisy ireo entana ireo koa manainga ny olona tsara sitrapo mba hanome vaovao raha mahafantatra olona na tranga mifandray amin’izao zava-misy izao ny tompon’andraikitry ny mpitandro ny filaminana eny an-toerana.
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=2758